တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ
Posted by Moe Tain Nyo at 6:02 PM
Lun Lunn October 31, 2010 at 6:17 PM
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဆိုလိုရင်းကို လွယ်ကူစွာ ပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုပါ။
Nyo November 1, 2010 at 1:21 PM
ပြီးတာနဲ့ မင်းအဖေကြီးရော အရင်လိုမူးနေတုံးပဲလားတဲ့။ အဲလိုအမေးခံရတဲ့ အဲဒီကလေး မျက်နှာလေး ပျက်ပျက်သွားပါတယ်။
I agree that we have to contribute homeland and peoples but do not agree above example.
If I were him, I won't do so because I believe everyone is standing on own ability.
Evenaking's son would become worthless thief if he is not capable with loose character
လူမျိူးတမျိူးရဲ့ identity က သူ့အပေါ် အများကြီး ရိုက်ခတ်မှု ရှိပါတယ်။ ပတ်စ်ပို့အနီကိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ ဘယ်လောက် မျက်နှာငယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ တော်တော်များများကြုံဖူးကြမှာပါ။
နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ ရှင်ပြုတုန်းက ရွှေထီးတောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောနေထက် လက်ရှိ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကို သိဖို့၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံဖို့၊ ပြင်သင့်တာတွေ အချိန်မီပြင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါ။